OPPO Find X, စပိန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်သော "စမတ်ဖုန်း" ဖြစ်လိမ့်မည် Gadget သတင်း
တရုတ်မိုဘိုင်းကုမ္ပဏီအသစ်သည်စပိန်တွင်ဆင်းသက်လာလိမ့်မည်။ အာရှရှိကြီးကျယ်ခမ်းနားသောဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများဖြစ်ပုံရသည်။ သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးရန် - OPPO သည်၎င်း၏ဇာတိနိုင်ငံ၊ တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယတို့တွင်ရှိသောအမှတ်တံဆိပ်ကြီးများထက်လူကြိုက်များသည်။ ပြီးတော့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာပွဲထုတ်ပြသဖို့ကုမ္ပဏီကဒါကိုသတိမပြုမိဘဲပါရီမြို့မှာတင်ထားတဲ့ terminal တစ်ခုနဲ့လုပ်လိမ့်မယ်။ OPPO ရှာရန် X.
OPPO Find X သည်တင်ဆက်သူများတက်ရောက်သူများအတွက်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ကုမ္ပဏီဟာ VIVO လို NEX model နဲ့အတူတခြားထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ခွဲခြားချင်တာကြောင့်ကျော်ကြားတဲ့ "Notch" ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့လို့ပဲ။ ၎င်းသည်ဘောင်မပါဘဲရှေ့တန်းသို့ရောက်ရှိရန်အဆီးအတားမဖြစ်သော်လည်း6လက်မထက်ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်စုစုပေါင်းမျက်နှာပြင်အာကာသ၏ 93,8 ရာခိုင်နှုန်းကိုသိမ်းပိုက်.
2 OPPO ပေါ်ရှိကွဲပြားသောကင်မရာ Find X
3 ဤ OPPO အတွင်းရှိပါဝါသည် high-end ကိုရင်ဆိုင်ရန်အတွက်
4 ဒီ OPPO ၏အပိုဆောင်းရှာရန် X
ဘောလုံးကစားသမားနေမာသည်တာ ၀ န်ယူခဲ့သည် OPPO Find X ကိုပထမဆုံးကြေငြာခဲ့သည်နှင့်ပေါ်တယ် the Verge သီးသန့်အနေဖြင့်၊ စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိသောကမ္ဘာပေါ်ရှိတစ်ခုတည်းသောအလတ်စား။ ထိုအခါမူကားငါတို့သည်သင်တို့ကို၎င်း၏ပြည့်စုံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစာရွက်နှင့်အတူထားခဲ့ပါ:
OPPO ရှာရန် X
ဖန်သားပြင် ၆.၄ လက်မ (6.4 x 2340 pixels) Full HD + AMOLED
Processor ကို 2.5GHz Adreno 845 GPU နှင့်အတူ Octa-Core Qualcomm Snapdragon 10 630nm မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်း
operating system ကို UI ColorOS 8.1 ဖြင့် Android 5.1 Oreo
နောက်ဘက်ဓာတ်ပုံကင်မရာ dual-sensor: 16 + 20 MPx
ဆက်သွယ်မှု 4G VoLTE / WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz) / Bluetooth5LE / GPS / USB Type-C / dualSIM
ဘက်ထရီ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနှင့်အတူ 3.730 mAh
OPPO ပေါ်ရှိကွဲပြားသောကင်မရာ Find X
ရှေ့နောက်ကင်မရာသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်မျှနေရာမယူနိုင်အောင်ဤ terminal တွင်တီထွင်ဆန်းသစ်သောယန္တရားတစ်ခုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ပြီးတော့ဒီစိတ်ကူးကရှေ့ကင်မရာကိုလိုချင်ရင်ဖန်သားပြင်ရဲ့နောက်ဘက်မှာပေါ်လာတဲ့စက်ယန္တရားတစ်ခုကိုတင်သွင်းဖို့ပဲ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ တစ် ဦး မော်တာလျှောယန္တရား အရာအာရုံခံပေါ်လာနှင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုကနေပျောက်ကွယ်သွားစေသည်။ အစတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအနည်းငယ်ပြုပြင်လိုက်သော်လည်း Vivo NEX တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းပင်။
ဒီအာရုံခံကိရိယာမှာအများဆုံး resolution ရှိတယ် 25 megapixels ဒါ့အပြင် 3D face scanning လည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ မှတ်စုတစ်ခုအနေဖြင့် OPPO သည် Animojis ကို၎င်း၏ပုံစံနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးသူတို့ကို“ Omojis” အဖြစ်နှစ်ခြင်းပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်နောက်ဖက်တွင်လက်ရှိဖက်ရှင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး dual sensor ကင်မရာကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ 20 နှင့် 16 megapixels အရာ, သင်တန်း, ငါတို့အလိုရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူကစားရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် bokeh.
ဤ OPPO အတွင်းရှိပါဝါသည် high-end ကိုရင်ဆိုင်ရန်အတွက်
ဤအတောအတွင်းဤ OPPO Find X သည်အားကောင်းသောအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုအထဲမှာ Processor ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြသသည် Snapdragon 845 8 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် 2,5 core နှင့် 8 GB RAM ကိုအသုံးပြုထားသည်။ 128 သို့မဟုတ် 256 GB ရှိသည့်သိုလှောင်ရုံနှစ်ခုကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ Android ကိုလုပ်သင့်တယ် -Android 8.1 Oreo သည် ColorOS 5.1 ဟုခေါ်သောစိတ်ကြိုက်အလွှာတစ်ခုအောက်တွင် ပို၍ တိကျသည်- ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင်ကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီးနောက်မျိုးဆက်သစ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုပုံမှန်မပါဘဲကစားရန်ခွင့်ပြုသည် နှေး သို့မဟုတ်နှေးကွေး။
ဒီ OPPO ၏အပိုဆောင်းရှာရန် X
extras အနေဖြင့်ဤ OPPO Find X တွင်နောက်ဆုံးပေါ် 4G ကွန်ယက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော terminal တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင် USB-C port ရှိပြီးဘက်ထရီကိုအားသွင်း။ မြန်မြန်အားသွင်းနိုင်စေသည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ထားသောဘက်ထရီတွင်ရှိသည် 3.760 mAh စွမ်းရည်.
သငျသညျအတွင်း၌ဆန္ဒရှိလျှင်၎င်းသည်မှတက်အိမ်သူအိမ်သားဖို့နေရာရှိပါတယ် SIM ကဒ်နှစ်ခု —NanoSIM - အကယ်၍ ၎င်းကို professional နှင့် personal terminal တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုလိုလျှင်။ ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စျေးနှုန်းများနှင့်ပစ်လွှတ်မည့်နေ့ရက်အတိအကျကိုမထုတ်ပြန်သေးပါ။ အတည်ပြုထားတဲ့အရာကတော့ OPPO Find X ကိုအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမှာရနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၎င်းကိုမတူညီတဲ့အရိပ်နှစ်ခုဖြင့်ရွေးနိုင်သည်အနီရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » OPPO Find X, စပိန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်သော "စမတ်ဖုန်း" ဖြစ်လိမ့်မည်
Google Home နှင့် Google Home Mini တို့ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်